Wararkii ugu dambeeyay ee Doorashada Aqalka Sare magaalada Jowhar - Jowhar somali news leader
Waxaa weli aan ka bilaaban magaalada Jowhar doorashada Aqalka Sare ee maanta la qorsheeyay in saddex kursi lagu doorto caasimada Hirshabelle ee magaalada Jowhar.
Hoolka ay doorashada ka dhici lahayd ayaan weli aysan imaan xildhibaano iyo weliba muharaxiinta saddexda kursi u tartamayso oo gaareysa illaa siddeed musharax.
Waxaa banaanka goobta ay doorashada ka dhacaysa ka socda olole ay wadaan musharaxiinta iyadoo weli uusan jirin musharax la dhihi karo wuu ku guuleysanayaa doorashadan maadaama ay tahay mid adag oo isu tanaasul ka jirin sida doorashooyinkii ka dhacay dowlad goboleedyada kale ee dalka.a
Doorashada saddex kursi oo ka tirsan Aqalka Sare ayaa maanta lagu dooranayaa magaalada Jowhar. Xildhibaanada ayaa weli diidan inay gudaha u soo galaan hoolka doorashada iyagoo weli ka rajo qaba in ay helaan lacag ay ku dooran karaan musharaxiinta.
Kursiga ugu adag ee maanta lagu dooranayo magaalada Jowhar ayaa ah kursiga uu hore ugu fadhiyay Muuse Suudi Yalaxow. Waxayna wararka qaar ay sheegayaa in la furay boorsooyin lacag ah oo kursigaan la dul dhigey.
kala soco jowhar.com sida ay doorashada maanta uga dhacdo Jowhar